Muxuu salka ku hayaa walaaca Soomaalida UK? | KEYDMEDIA ONLINE
Walaac xooggan ayey muujinayaan Soomaalida ku dhaqan Dalka Ingiriiska, kadib dil lagu tuhmay wiil asalkiisu yahay Soomaali inuu u gaystay David Amees oo ahaa Xildhibaan muxaafid ah tan iyo 1983-kii.
LONDON - Dilkan oo dhacay jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa si gaar ah u sameeyey Jaaliyada Soomaaliyeed ee UK iyo qoyska uu ka dhashay wiilka lagu eedeeyey oo lagu magacaabo Cali Xarbi Cali ahna 25 jir ku dhashay dalkaasi.
Jaaliyadda ayuu wal walkooda ugu badan ku qotomaa in kiiskaasi ay ka dhashaan falal cunsirinimo oo shaki galiya habka nololeedka bulshada Soomalida oo dalkaasi ka helay magan-galyo qaxootinimo.
Booliska UK ayaa xiray Cali Xarbi Cali oo ah wiilka looga shakisan yahay falkan dilka ah, iyagoo teloofankiisa gacanta ka qaaday Xarbi Cali kulane oo ah Aabaha dhalay tuhunsanaha, iyagoo sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan, taasoo walaac hor leh ku abuurtay isaga iyo Jaaliyadda kale.
Xarbi Cali Kulane ayaa horey u soo noqday la taliyaha dhanka warbaahinta ee Xafiiska Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Sharmarke, waxana xarigga wiilkiisa loo adeegsaday xeerarka ka dhanka ah argagixisada.
Qoraal uu ugu jawaabayey Wakaaladda Wararka ee Reuters, ayuu xarbi kaga gaabsaday inuu ka hadlo arimaha la xiriira eedaha loo tirinayo wiilkiisa, maadaama ay howlaha baaritaanku bilaw yihiin, waxana Xarbi uu qiray in isaga iyo qoyskiisa ay wajahayaan mid ka mid ah maalmiihii ugu adkaa nolashooda.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool UK ayaa warbaahinta la wadaagay in ay soo gaarayaan farriimo handadaad ah, kuwaasoo argagax weyn ku abuuray, waxana ay xuseen in dhambaaladasi ay ku wargaliyeen booliska oo iminka ku daba jira.
David Amees oo ahaa 69 jir, ayaa ka tirsanaa Barlamanka Britain, waxana dilkiisa oo noqday xaalad soo cusboonaatay ay wal wal badan ku abuurtay dadka Soomaalida ee ku sugan UK iyo qoyskii uu ka soo jeeday wiilka dilka ku eedeysan.